मानवता किन मर्दै गयो ?
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ दोस्रो लहर नेपालमा भित्रिसकेको अवस्था छ । संक्रमणले परिस्थिति भयावह बन्दै गइरहेको अवस्था टड्कारो देखिन्छ । दिनानुदिन अस्पतालहरूले थेग्नै नसक्ने गरि कोरोना सक्रमितहरू उपचारार्थ जाने गरेका छन् भन्ने विभिन्न समाचार माध्यमले भनिरहेका छन् । संक्रमितको मृत्यु दर पनि त्यसैगरी बढ्दै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर यस्तो आपतकालिन महामारीको अबस्थामा उद्योगी ब्यापारी व्यावसायीहरूले कालाबजारी गरिरहेका र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि गरि सर्वसाधारण माथि अर्को आतंक मच्चाएको छन् । कोरोना सक्रमित बढेपछि अक्सिजनको अभाव चर्किदै गइरहेको छ । अक्सिजन सिलिन्डर लुकाएर राखेको र काला बजारीया गरेको भन्ने समाचार विभिन्न संचार माध्यमले भनिरहेका छन् । साँच्चै ती उद्योगी ब्यापारीहरूले कालाबजारी गरेकै हुन् भने यिनीहरूमा ब्यबसाय कमाउ धन्दा बाहेक भित्र अलिकति पनि मानवता हुँदैन ? मौका पायो कि चौका हानिहाल्नु पर्ने ?
यस्तो आपतविपत, भयावह महामारीमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु मानवताविरोधी अपराध हो । समाजसेवा गर्नु र नागरिकको जीवनरक्षा गर्न खट्नु आजको अत्यन्त आवश्यकता हो । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्नु नै मानवीयता हो । बिपत र महामारीको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने मौकाको फाइदा लिने जो कोही होस्, यो समाजको अपराधी हो । जनताको दुश्मन हो ।
यस्ता कालाबजारीया, कमिशन एजेण्ट उद्योगी ब्यापारी व्यावसायीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही गर्नैपर्छ । अनुगमनलाई तिब्र बनाउनु पर्छ । जो कोही हुन त्यस्तालाई मानवताको पाठ सिकाउनु पर्छ । यस्ताले कुनै पनि व्यक्ति, शक्ति अथवा सरकारबाट संरक्षण पाउनै हुँदैन ।
यस्तो बिपत्तिको घडीमा भयावह परिस्थिति सहयोगी मनले कसरी उचित ब्यबस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान जानु त कता हो कमाउ धन्दामा लाग्नु हदैसम्मको अमानवीय कार्य हो । राष्ट्रघात हो ।
यस्तो अवस्थामा त जसले जहाँबाट जसरी सक्छ सहयोगी हात बढाउनु पर्छ । मानवरक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । कोहि अमानवीय बन्न हुँदैन ।
कोरोना महामारीमा कोरोना सक्रमित सबैले उपचार सेवा पाउनु पर्छ । यो बिरामीको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । कोरोनाका बिरामीले अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै बाटोमै मृत्यु वरण गरेको कारूणिक दृश्य देख्न र सुन्न कसैले नपरोस् ।
यो भाइरस तिब्र गतिमा बढ्नु एउटा कारण अझै पनि स्वयम मान्छेमा चेतना जागेको छैन । संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ बिधि नअपनाई लापरबाही, खेलाँची गर्नाले पनि कोरोना भाइरस समाजका ब्यक्ति ब्यक्तिमा फैलिदै गएको हो । कोरोना महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अहिलेको अवस्थामा परीक्षणलाई व्यापक बनाउनै पर्छ । उपचारको समुचित व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
अर्कोतर्फ यस्तो अवस्थामा जनताले पनि सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन । समाजका सचेत नागरिक सबैले सही सल्लाह सुझाव सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ । सबैको सहयोग यसको उचित ब्यबस्थापनले महामारी रोकथाम हुने हो, अन्यथा रोकथाम हुन सक्दैन, मानवीय क्षतिले झन झन बिकराल रूप लिनेछ ।
स्वास्थ्यसेवाको अवस्था अहिले पनि दयनीय नै छ । जसरी तिब्र गतिमा उपचार हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । अस्पतालहरूमा बेडको अभाव खड्किएको छ । यो कदापि राम्रो होइन । सरकारले उपचार सामग्रीसहितका कोरोना अस्पताल बढाउनुपर्छ । सबैले आआफ्ना क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पूरा गरौं ।